Articles tagged 'kaseke'
Kaseke warns steep prices may drive tourists away 2 November 2018 HARARE - Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer Karikoga Kaseke has read the riot act to tourism sector players after they sharply increased their prices in a move that risks driving customers away. Kaseke — who had a fierce run-in with the management of a local hotel last we...
Kaseke calls for command tourism 13 June 2017 BULAWAYO - Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer Karikoga Keseke has revealed that he has approached Vice President Emmerson Mnangagwa seeking the launch of command tourism. Kaseke told delegates here during the official launch of the 2017 edition of the Sanganai/Hlanganani ...
Zim tourism improving: Kaseke 7 May 2017 HARARE - Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer Karikoga Kaseke has said the country's tourism sector is improving, owing to the peace currently prevailing across the nation. In a statement yesterday, Kaseke said that the tourism industry in Zimbabwe has seen a steady growth ...
Zim has high hopes for tourism 30 December 2016 HARARE - Zimbabwe's economy is likely to strengthen due to an anticipated recovery in tourism, the Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has said. Zimbabwe, isolated and shunned by the West for suspected human rights abuses under President Robert Mugabe, has recently made steady gains in tourism. ...
Provide condoms in hotels: Kaseke 10 October 2016 HARARE - Zimbabwe Tourism Authority chief executive Karikoga Kaseke has appealed to hotels and lodges to prioritise placing condoms in rooms for the convenience of their patrons. He said the ravaging effects of HIV/Aids — which has left an estimated 1,5 million Zimbabweans living with the infe...
Graft blitz: Grace's allies say bring it on 8 June 2016 HARARE - First Lady Grace Mugabe's perceived allies who are targets of a hotly-disputed government anti-corruption blitz that has heightened tensions within President Robert Mugabe's faction-ridden Zanu PF say they can't wait to face their accusers in court and demonstrate that the campaign is no...
Let's help keep our cities clean 15 April 2016 HARARE - Zimbabwe Tourism Authority chief executive Karikoga Kaseke touched a raw nerve this week when he pointed out that Harare, once known as the Sunshine City, is now one of the filthiest cities in southern Africa. Kaseke blamed the city fathers for failing to do elementary work such as cu...
Harare dirtiest city in southern Africa - Kaseke 14 April 2016 HARARE - The City of Harare is the dirtiest capital city in southern Africa and the city fathers are anti-tourism, Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) chief executive officer Karikoga Kaseke told the Daily News this week. Kaseke said coupled with the dirt, most roads leading to high density areas...
Another airline departs 18 August 2014 HARARE - Egyptian airline, Egyptair, has decided to roll back its Zimbabwean operation from next month, adding to woes of a flagging aviation industry, which has been battered by deteriorating economic and political slowdown. The flag carrier of Egypt, which returned to the Zimbabwean skies la...
Construction of convention centres key: Kaseke 17 August 2014 HARARE - Government must prioritise the construction of convention centres to boost the country’s tourism earnings, Zimbabwe Tourism Association (ZTA) chief executive said. Karikoga Kaseke told a press briefing in the capital on Thursday that the country was incapacitated to host conventions a...
KLM pull out hits Zim tourism: Kaseke 2 August 2014 HARARE - KLM Royal Dutch Airlines (KLM)’s suspension of Zimbabwe flights will deal a heavy blow to the country’s tourism sector revival efforts, the Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) has said. This comes as KLM on Wednesday said it would discontinue its flights to Harare and Lusaka, two years a...
Promote domestic tourism 7 July 2014 HARARE - While Zimbabwe was this year awarded with the honour of being Europe’s best touristic destination by the European Council on Tourism and Trade (ECTT), the immediate focus for ministry of Tourism and Zimbabwe Tourism Authority (ZTA) should be to promote domestic and regional tourism. W...